आज भाइटीका - टीका लगाउँदा कता फर्कने, कुन–कुन रङ्गको टीका बनाउने ?
[November 26, 2020 06:37:54 AM]
सोलुखुम्बु । आज यमपञ्चकको पाँचौ दिन अर्थात् तिहारको मुख्य दिन भाइटीका । भाइ टीकाको उत्तम साइत बिहान ११ बजेर ३७ मिनेटमा छ । भाइटीकाको दिन सप्तरंगी टिका लगाउने प्रचलन छ । गीत पनि बनेको छ "निधारमा लर्काएर सप्तरंगी टीका"
शास्त्रीय मान्यता भने अलि फरक छ । शास्त्रले भन्छ – तिहारमा सप्तरंगी होइन, पञ्चरंगी टीका लगाउनुपर्छ । भाइ टीकामा रातो, सेतो, पहेँलो, हरियो र नीलो गरी पाँच रंगको टिका लगाउने भनेर शास्त्रमा लेखिएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डा। रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिएका छन् ।
कुन दिशा फर्केर भाइ टीका लगाउने ?
भाइ टीका लगाउने र लगाइदिने व्यक्ति कुन दिशामा फर्किने भन्ने कुराको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । टीका थाप्न बस्ने व्यक्तिले चन्द्रमालाई सम्मुख वा दायाँतिर पार्नुपर्छ ।